अमरिकी राष्ट्रपतिमा पहिलो पटक हिन्दु महिलाको उम्मेदवारी – Medianp
सोमबार, ०४, चैत, २०७५
अमरिकी राष्ट्रपतिमा पहिलो पटक हिन्दु महिलाको उम्मेदवारी
Media NPप्रकाशित मिति: शनिबार, पुष २८, २०७५१२:४९0
एजेन्सी,२८ पुस । अमेरिकाको नयाँ राष्ट्रपतिमा पहिलो पटक हिन्दु महिलाले उम्मेदवारी दिने तयारी गरेकी छन् । प्रथम हिन्दु सांसद समेत रहेकी तुलसी गबार्डले अर्को हप्ता औपचारीक रुपमा आफ्नो उम्मेदवारीको घोषणा गर्ने बताएकी हुन् । उनले एक अन्तर्वातामार्फत २०२० को प्रथम सांसदका लागि आफुले उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको बताएकी हुन् ।
आफ्नो बारेमा चिन्तित रहेका कयौँ ब्यक्तिले आफुलाई सहयोग गर्ने बताउँदै उम्मेदवारीको निर्णय दिनु भन्दा अगाडी थुप्रै चुनौतीहरुको सामाना गरिहेको बताइन् । स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, अपराधिक न्याय सुधार तथा जलबायु परिवर्तन, अपराधिक न्याय जस्ता मुख्य कुराहरुमा आफु निरन्तर लाग्ने बताएकी छन् । ४ पटक सम्म सासंद पदमा निर्वाचित भइसकेकी ३७ वर्षिय तुलसीले हरेक पटक चुनाव जित्दा विशाल अन्तरले प्रतिद्धन्दिलाई पराजित गर्दै आएकी छन् ।
यो भन्दा अगाडी १२ वर्षसम्म अमेरीकी सैनिकमा रहेर इराकमा तैनाथ जवान बनेर काम गरेकी थिइन् ।
अहिलेसम्म अमेरिकामा हिन्दुले राष्ट्रपति पदमा उम्मेदवारी नदिएको र उनको यो उम्मेदवारी इतिहासकै नयाँ बन्नेछ । यो उम्मेदवारीमा उनको जित भयो भने एकैपटक तीन नयाँ रेकर्ड बस्ने उनको विश्वास रहेको छ । प्रथम हिन्दु महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला राष्ट्रपति र सबैभन्दा कम उमेरकी महिला राष्ट्रपतिमा उनको नाम रहनेछ । अमेरिकाको समोआमा क्याथोलिक परिवारमा जन्मेकी उनी आमा ककेशियनको कारण हिन्दु धर्म अंगालकेकी हुन् । तुलसी २ वर्षको हुँदा हवाइ सरेपछि उनको परिवार हिन्दु धर्ममा गएका हुन् ।
तुलसी अमेरिकाको पहिलो महिला सासंद हुन् । उनले भागवत गीताको नाममा सपथ लिएकी थिइन् । अमेरिकामा बसोबास गर्ने भारती र नेपालीको माझ निकै लोकप्रिय रहेकी छन् । अमेरिकामा बसोबास गर्ने युहुदीपछि भारतीयहरु अमेरिकाको सबैभन्दा धनि र प्रभावशाली समुदायमा पर्छन् । तुलसीले सन् २०१२ मा पहिलो पटक हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभमा निर्वाचित भएकी थिइन् ।
‘रणवीर’ ट्रेलर रिलिज (भिडियो)
दुई वटा प्लेन नै चार्टर गरेर जन्ती लाने यी हुन धनकुटाका किसानका छोरा ! खर्च कति ?
श्रीलङ्कामा भ्रष्टाचार विरुद्धको पाँच बर्षे अभियान सुरु
प्रविधि कम्पनीहरु मार्फत जासुसी गरिएको छैन – चिनिया प्रधानमन्त्री
हाफिजलाई प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव रोकेकामा भारतको असन्तुष्टी
न्युजिल्यान्डको क्राइस्टचर्च मस्जिद आक्रमणमा ४० को मृत्यु, २० जना गम्भीर घाइते
बेलायती संसदद्वारा ब्रेक्जिटबारे प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले ल्याएको मस्यौदा पुनः अस्वीकार
ब्राजिलको एक विद्यालयमा गोली चल्दा आठको मृत्यु
भेरी करिडोर ठेक्कामार्फत काम हुँदै
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक पारित
नेपाल फूलमा परनिर्भर
कङ्गोमा रेल दुर्घटनामा तीसको मृत्यु
नेपालकै नम्बर एक एप ‘हाम्रो पात्रो’को मेगा अपडेट सार्वजनिक
जान्नुहोस् ! यसकारण हुन्छ भक्कभकाउने समस्या
पम्फाले रुचाइन् ‘जानी नजानी’
के पकाएको कुखुराको मासु खाँदा सर्छ त बर्डफ्लु ? यसो भन्छन चिकित्सक
गाडी दुर्घटनामा एकको मृत्यु